It is me. Ko Niknayman.: တရား ဓမ္မ မဲ့ နေတဲ့ ဒို့ တိုင်းပြည်။
မတ် ၂၈၊ ၂၀၀၈
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူ အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်အေးသည် ယမန်နေ့ည ၉ နာရီခန့်က စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင် အမည်မသိသူတဦးက အရိုက်ခံရသဖြင့် ဦးခေါင်းတွင် ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ယခု လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောအထူးကု၊ အတွင်းလူနာဆောင် အဆောင် (၁)ကုတင်နံပတ် (၂)တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်း ရပြီး ခေါင်းတွင် ၅ ချက်ချုပ်ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယမန်နေ့ည ၉ နာရီလောက်တွင် ဦးမြင့်အေး သည် အဖော်တွေနဲ့လမ်းခွဲပြီးအပြန် စမ်းချောင်းပဒုမ္မာလမ်းနဲ့ ဗားဂရာလမ်းဒေါင့်မှာ ကားငှားနေခိုက် လူတယောက်က ခေါင်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကို နောက်ကနေ ချောင်းရိုက် သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်ပြီးနောက် အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကိုသွားပြသောအခါ ညာဘက်နားထဲက သွေးတွေထွက်နေလို့ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးကို ပို့လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အန်အယ်လ်ဒီ၏ ဥက္ကဌဟောင်းဖြစ်သူ ဦးမြင့်အေးသည် လူ့အခွင့်အရေး စာရွက်စာတမ်းများဖြန့်ဝေသည့်အတွက် ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် စစ်အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါသည်။
ဤသြိ့ပင်အလားတူဖြစ်ရပ်များဖြစ်သော ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၌ အဆိုပါ (HRDP)အဖွဲ့ဝင်များအား ဧရာဝတီ တိုင်း၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ အုတ်ပုံကျေးရွာအနီးတွင် ကြံ့ဖွံ့နှင့်မြို့နယ် ရဲအာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်း ကာ ရိုက် နှက်ခဲ့သဖြင့် (HRDP)အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဘူးပါသည်။ ဦးမြင့်အေး အရိုက် နှက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (HRDP)အဖွဲ့မှ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး ဦးကျော်ကျော်ထံ တွင် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ ပါသော်လည်း အုတ်ပုံကျေးရွာတွင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက ရိုက် နှက်ခဲ့သည့် အမှုအခင်း၌ (HRDP)အဖွဲ့မှ အမှုဖွင့်ကာ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရက ကျူး လွန်သူများအား အပြစ်ပေးခြင်းမရှိပဲ ရိုက်နှက်ခံရသူ (HRDP)အဖွဲ့ဝင် ကိုမြင့်လှိုင်အပါအ၀င် လူခြောက်ဦးအား ထောင်ဒဏ် (၈) နှစ် (၄)နှစ် အသီးသီး ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များအား ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချမှုများ ပြုလုပ်နေသလို ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ငွေပေးကာ..မာဖီးယား လူမိုက်များ ဆန်ဆန် အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်မှုများ ကို ပြုလုပ်လျှက် ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဤသို့ ပြည်သူလူထူအပေါ် မင်းမဲ့ဆန်ဆန်..ပြုမူ ရက်စက်မှုများအား ပြုလုပ်စေရန် အတွက် လက်သပ် မွေး ထားသော အဓမ္မ ၀ါဒီဂိုဏ်း သားများ ( ကြံ့ဖွံ့ ၊ စွမ်းအားရှင်၊ လုံထိန်း၊ နှင့် ရဲ မီးသတ်) များ နှင့် ကြိုးဆွဲသူ..စစ် အာဏာရှင် အားပြည်သူ အားလုံးဆန္ဒဖြင့် ဖြုတ်ချရန် အချိန်တန်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တပ်လှန့် နှိုးဆော် လိုက်ပါသည် ခင်ဗျား။
Posted by အာဇာနည် at 8:25 AM